Maitiro ekuwedzera tsika podcast kuApple Watch | Ndinobva mac
Imwe yesarudzo yatinayo nhasi paApple Watch yedu kuwedzera maPodcast atinoda. Nhasi tinokuratidza maitiro aungawedzera podcast kuApple Watch nenzira yakapusa uye inokurumidza.
Chokwadi ndechekuti vashoma vashandisi vanoita izvi nekuti tinogara tichitakura iyo iPhone nesu, asi ku avo vanoda kusiya iPhone kumba pane imwe nguva asi usingade kumira kuteerera podcasts anogona kuita izvi.
Wedzera tsika podcast ku Apple tarisa
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuvhura iyo Podcast app pane iyo iPhone uye kunyorera kune iyo podcast yatinoda. Kana tangova neizvi zvakagadzirira (nenzira iyo iwe yaunogona kunyorera kune iyo Apple podcast) zvakapusa isu tinovhura yeWatch application ye iPhone yedu uye isu tinotevera aya matanho:
Isu tinovhura iyo Podcasts app uye tinya pa Tsika
Isu tinosarudza mapurogiramu zvakananga nekumaka iwo atinoda
Iro gore rinowoneka uye panguva iyoyo wachi ichaenderana zvishoma zvezvikamu zvitatu zvechirongwa chimwe nechimwe chaunosarudza
Izvo zvinokwanisika kuti kana isu tikangosarudza podcast, iyo wachi inoenderana zvese izvo zvikamu zvausina kuteerera. Kana iwe uchida kuti wachi ienderane paApple Watch, ese maPodcast ane kunyoreswa, tinoisiya mukati "Kutevera". Izvi zvinowedzera anokwana gumi podcast pawachi otomatiki.
Pakutanga, izvi zvikamu gumi zvinowirirana muApple Podcasts app iyo iwe yaunogona kuzoteerera zvakananga nekubatanidza Bluetooth headset kune wachi pasina kutakura iyo iPhone, asi kana unogona kuzvisarudzira kuti vateerere kune iwo aunoda Unogona kuzviita nenzira yatakuratidza. Wobva wangoenda kuPodcasts app paApple Watch uye wosarudza iyo yaunoda zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekuwedzera tsika podcast kuApple Watch